Kwiintsuku ezimbalwa ezedlulileyo kwenye yeendawo zokutyela ezikuloo ndawo kwakukho i-albhamu entsha ye-Angelica Varum "Umfazi Ohambayo". Iindwendwe ezininzi ezivelele ezivela "kumlindi omdala" zavela kuloo mcimbi. Ukuhalalisela u-Angelica Varum weza uFilip Kirkorov, uLevi Leshchenko, uVladimir Presnyakov, uJasmine kunye nabanye abadumile.
Iindaba zakutshanje malunga nesiganeko zivele kwi-Star Instagrams.
Phakathi kweendwendwe zika-Angelica Varum nguLarisa Dolina. Umculi odumileyo ukhangela ingqalelo abo babakho ngeenguqu ezingalindelekanga ekubonakaleni kwakhe. Umdlali we-actress wayebukeka engaqhelekanga.
Umfanekiso omtsha kaLarisa Dolina wabangela ingxabano kwi-Intanethi
Abo bangayazi iminyaka engakanani uLarisa Dolina, baya kumangaliswa: umculi uneminyaka engama-61, kodwa ukhangeleka kakhulu kuneminyaka yakhe. Ukufunda kwiifoto iimpawu zikaLarissa Dolina, umntu akanako ukuthetha ngokuzithemba ukuba umculi ubhekiswe kubagqirha beeplastiki. Akukho tshintsho olukhulu lwenzeka. Yintoni eyenzekayo ebusweni bukaLarisa Dolina?
Ngethuba elidlulileyo, umculi waqala yakhe i-microblogging kwi-Instagram, apho wayehlala ehambisa iifoto ezintsha. Nangona kunjalo, emva kwexesha elithile uLarisa Dolina ususile i-akhawunti, ngoko ke iindaba ezikufutshane malunga naye kunye nezithombe ezintsha zeenkwenkwezi zingabonwa kuphela kumaphepha osebenza nabo.
Iifoto zikaLarisa Dolina zixoxa ngokutshintshwa kwiWeb kwizinto ezenzeke ekubonakaleni kwakhe. Abanye bakholelwa ukuba umqhubi ogqithiseleyo ngeenkqubo zokuvuselela, abanye banokuqiniseka ukuba wayemane engafuni izimonyo ezikhazimulayo.
Abafundi banxusa uLarisa Dolina ukuba anikezele ngokukhawuleza izinwele, enze i-blanting bang, wandise umlomo wakhe aze enze ukwenziwa okwenziwe.
Iifoto zoo-Erotic zika-Olga Buzovy zithatha iwebhu
Buzova ulahlekelwe ingqondo ngqo kwinqanaba, ividiyo
Umyeni kaKsenia Sobchak uphumla kwinkampani yamadoda anesigxina, ifoto
UJulia Snigir wazala kwisikliniki saseMoscow
U-Olga Buzova uthatha izifundo ze-vocal kwaye uyilungiselela inkqubo yodwa
Ngaba kuncedo ukulala ngesondo kunye nokuba kaninzi kangakanani?
Ukuqhawula imithi, izilwanyana ezinempilo kunye ezihle
Shish kebab kusuka kumakhowe ehovini
Ukuthanda okanye ukusebenzisa: sifunda iinjongo ezilungileyo zomntu
Umgubo womtshakazi, intloko yomtshakazi
Yonke into yowesifazane: ubuhle, impilo